डा.केसीको गिरफ्तारीको विरोध गर्दै अविलम्ब रिहाइको माग ग¥यो क्रान्तिकारी माओवादीले – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
प्रकाशित मिति : २०७४ पुस २५
काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. गोविन्द केसीको गिरफ्तारीको विरोध गर्दै अविलम्ब रिहाइको माग गरेको छ । क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता हरिभक्त कँडेल‘प्रतीक’को हस्ताक्षरमा जारी वक्तव्यमा यस्तो माग गरिएको हो ।
वक्तव्यमा डा. केसीको गिरफ्तारीबाट राज्यको निरंकुश शैली र गैरजनतान्त्रिक चरित्र उजागर भएको भन्दै डा. के.सी.ले उठाएका जायज मागहरु पुरा गरी अविलम्ब रिहाई गर्न माग गरिएको छ र रिहाई नगरिए यस परिस्थितिबाट पैदा हुने सबै खाले परिणामको जिम्मेवार स्वयं सरकार नै हुनुपर्ने चेतावानी समेत दिइएको छ ।
अपराधीलाई जसरी विनासूचना मध्यरातमा गिरफ्तार गरी मंगलबार अदालतमा बयानका लागि उपस्थित गराइएका डा. केसीले अदालत परिसरभित्रै अदालतमा कसरी न्याय किनबेच हुन्छ र भ्रष्टहरुको अखडा बनेको छ भन्ने लिखित बयान दिएका छन् ।
उनको गिरफ्तारीको चौतर्फी विरोध र अबिलम्ब रिहाईको लागि माग भइरहेको छ ।